Iphepha lasekhaya ― ILeetags - I-Instagram Hashtags
I-Hashtags generator ye-Instagram caption
Fumana abalandeli abaninzi kunye nokuthandwa kwi-Instagram.
IiHashtag ziyiseti yamagama aphambili abhalwa luphawu lwe-hash olusetyenziswa ikakhulu ukuchaza umxholo weposi kwaye linxibelelanise nezinye izithuba ezinomxholo ofanayo. Xa i-hashtag isetyenziswa kwiposi, loo posi iya kunxulumana nabanye abane-hashtag efanayo.
Isebenza njani iLeetags?
Ukufumana ii-hashtags ezijikelezayo chwetheza nje igama elinye okanye ngaphezulu elihambelana neposti yakho kwindawo yokukhangela ngaphandle kweziphumlisi kwaye zahlukaniswe ngezithuba ezilula. Insiza ikwanamacandelo ahlukeneyo ukuqhubekeka ukukhangela. Kule meko kufuneka ufikelele kuluhlu lweendidi ngeemenyu ezantsi zeapp, emva koko ufumane udidi kunye necandelwana elinxulumene kakhulu neposi yakho. Zombini ezi zikhangelo ziya kubangela uluhlu lwee-hashtag ezihambelana noko. I-hashtag nganye ekuphenduleni ilandelwa linani lezithuba ekwakusetyenzisiwe kuzo kunye nokubaluleka kwayo, isenza kube lula ukukhetha.
Uyisebenzisa kanjani i-hashtag kwi-Instagram?
Unxibelelwano lwentengiso lucwangcisa izithuba ngokwee-hashtag eziqukethe. I-Leetags inokhangelo olululo ngexesha elifanelekileyo elikunika ii-hashtag ezisetyenziswa kakhulu emhlabeni. Oku kukuvumela ukuba udibanise upapasho lwakho kunye nolona kujongwa kwaye luthande imeko yehlabathi.
Ufumana njani abalandeli kunye nokuthandwa kwi-Instagram?
Usebenzisa i-Leetags unokuphucula ii-caption ze-Instagram ezinee-hashtag ezikukuqhubekeka, ukwandisa inani leemboniselo kunye nokuthandwa kunye nokufumana abalandeli abaninzi.
Ungayiphucula njani ishishini lakho kwi-Instagram?
NgeLeetags une-hashtag ephambili enxulumene nemveliso okanye inkonzo, okonyusa ukubaluleka kwezithuba zakho kunye neprofayile yakho kwaye, ngenxa yoko, wenza ishishini lakho laziwa ngakumbi.
InstagramTwitterFacebookImeyileUmgaqo-nkqubo wee-CookiesUmthetho wabucala© 2020 Leetags.